Ingxoxo noNicholas Outa waseMaseno University, eKenya - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on I-16th February ngo-2021 I-16th February ngo-2021
Le ngxoxo ihlola umsebenzi kaMnu. Nicholas Outa wocwaningo, ulwazi kanye nemizamo yakhe.
Amaphrofayli aku-inthanethi: I-ORCID iD // LinkedIn // ResearchGate // -Google Scholar // I-Academia.edu // Twitter
UNicholas ungumdala waseKenya oneminyaka engama-35 futhi wenza izifundo zobudokotela emkhakheni weFisheries and Aquaculture e I-Maseno University, EKenya. Uneziqu zeMasters of Science (MSc) zeLimnology neWetland Management kusuka UNESCO-IHE, ENetherlands kanye IBOKU University, EVienna; kanye ne-BSc ku-Applied Aquatic Science kusuka ku- I-Egerton University, EKenya. Uphinde futhi aqeqeshe iScientific Writing and Communication e-Training Centre in Communication (TCC-Afrika) kanye nomeluleki wabaphenyi bokuqala bemisebenzi. Izintshisekelo zika-Outa zifaka phakathi ucwaningo ngobuchwepheshe bezolimo zasemanzini, imvelo yezinhlanzi kanye nokuxhumana kocwaningo nokushicilela, ukusebenzela umphakathi nokufundisa.
UMnu Outa ukhuthaza uLabeo victorianus (Ningu) ngehomoni ye-Ovaprim ngokuzama ukuzalanisa
Ufunde kanjani nge-AfricArXiv?
Ngaziswa i-AfricArXiv ngeSikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana (TCC-Afrika)
Wake wabelana ngemiphumela kokunye okubhaliwe noma kwizikhungo zezikhungo? insimu kanye nedeski
Yebo nginakho I-OSF futhi Isayensi Ivulekile
Xhumanisa / okulayishiwe okwamukelwe nomsebenzi owashicilelwe:
Ubuchwepheshe 'be-Freshwater Integrated Multitrophic Aquaculture (FIMTA) eLake Victoria' indatshana ekhuluma nge #ScienceOpen: https://www.scienceopen.com/document?id=31b054a2-aa2c-42cc-b58b-3b602a75ef4a
Waithaka, E., Yongo, E., & Outa, NO, Mnu (2020, February 29). I-Population biology yeNile tilapia, i-Oreochromis niloticus eLake Naivasha, eKenya. https://doi.org/10.31219/osf.io/p72h8
OTIENO, D., Hilda, N., Chrispine, N., Odoli, C., Aura, C., & Outa, CHA, Mnu (2019, Disemba 10). Ukugcwala kwe-Water Hyacinth (Eichhornia crassipes), ukuxhumana nezakhamzimba, i-aquatic biota kanye ne-weevil yokulawula eWinam Gulf, eLake Victoria, eKenya. https://doi.org/10.31730/osf.io/r67yj
I-Outa, NO, Mnu, Mungai, D., & Keyombe, JLA (2019, Okthoba 9). Umthelela wezinhlobo ezifakiwe ezinhlelweni zemvelo echibini: Icala Lamachibi iVictoria neNaivasha, eKenya. https://doi.org/10.31730/osf.io/b5nyt
UMungai, D., Outa, NO, Mnu, Obama, P., Ondemo, F., & Ogello, E. (2019, Septhemba 20). Isimo sokucwaninga ngezindawo zokudoba zeLake Victoria: Imininingwane yomlando neyamanje mayelana nezindawo zokudoba kanye nemvelo echibini. https://doi.org/10.31730/osf.io/6gr7d
Outa, NO, Mnu, Yongo, E., Keyombe, J., & David, N. (2019, Septhemba 17). Ukubuyekezwa kwesimo sezinhlobo ezithile zezinhlanzi ezinkulu eLake Victoria. https://doi.org/10.31730/osf.io/je4cy
Ngabe ucwaningo lwakho luhambisana kanjani nomongo wase-Afrika?
Ucwaningo lwami lwenziwa eKenya, ikakhulukazi eLake Victoria nasezindaweni ezizungeze iLake Victoria namanye amachibi kubandakanya neLake Naivasha.
Yimuphi umbuzo noma inselele obuzimisele ukuyibhekana nayo ngenkathi uqala lo msebenzi futhi yini okutholakele okuholele emiphumeleni yakho yamanje?
Kunemibuzo eminingi engaphenduliwe mayelana nemvelo eminingi yasemanzini e-Afrika nezinhlobo zezinhlanzi ezikulo. Kungalesi sizathu ukuthi bengilokhu ngenza ucwaningo lwensimu kanye nedeski ukuthola izimpendulo zale mibuzo. Izikhala zokucwaninga zikhona ezindaweni eziningana ngoba ucwaningo oluningi lugxila ezindleleni zobuchwepheshe kwesinye isikhathi lapho kungafinyelelwa noma kuqondwe ngabaphenyi bokuqala bezemfundo kanye nezazi. Ngakho-ke bengifuna ukwenza ucwaningo oluyisisekelo ukwenza lula ukuqonda okungcono kwezokudotshwa kwezinhlanzi nokufuywa kwezinhlanzi zasemanzini ngabafundi abancane baseyunivesithi nasemakolishi e-Afrika.
Ngabe ucabanga kanjani ukuxhumana kwezokucwaninga e-Afrika?
Ama-preprints kanye namajenali athinta kakhulu ase-Afrika ayikusasa le-African Research Communication. Iningi lamajenali lizinze kwamanye amazwekazi ngaphandle kwe-Afrika, okwenza ukugxila kwabo kungabi ikakhulukazi ezwenikazi i-Afrika. Ngakho-ke lokhu kufuna amakhosombe afana ne-AfricArXiv avumela abacwaningi base-Afrika ukuthi futhi bashicilele umphumela wabo wocwaningo, kufaka phakathi, ngezilimi zendawo I-PubPub, okwenza ucwaningo lutholakale kalula futhi kube lula ukuluqonda futhi lusetshenziswe kumongo wase-Afrika.
I-Open Access kufanele ilwele futhi kufanele yenzeke manje okungenani ezwenikazi lase-Afrika.
Ingabe unayo imicabango noma imibuzo kaMnu Outa? Ungabashiya ebhokisini lokuphawula elingezansi.
Abahleli: Johanssen Obanda
Ngabe usebenza ocwaningweni e-Afrika noma nge-Afrika? Ungasebenzisa i-AfricArXiv, ukuhambisa umsebenzi wakho ku https://info.africarxiv.org/submit/
I-AfricArXiv ingumlando oholwa ngumphakathi wokuxhumana ocwaningweni wase-Afrika. Sinikeza ipulatifomu engenzi inzuzo ukulayisha amaphepha okusebenza, okulungiswayo, imibhalo yesandla eyamukelwe (amaphrinta asemuva), izethulo, kanye namasethi wedatha ngokusebenzisa amapulatifomu esisebenza nawo. I-AfricArXiv ibekelwe ukukhuthaza ucwaningo nokubambisana phakathi kososayensi base-Afrika, ukuthuthukisa ukubonakala kokuphuma kocwaningo lwase-Afrika kanye nokukhulisa ukusebenzisana emhlabeni jikelele.
Tags: I-AfricanResearchUkutholakala kocwaningo lwase-AfrikaUcwaningoUkuxhumana Ngezazi
I-podcast: Ukwenza I-African Science Ibonakale
Ithimba le-AfricArXiv lifake isandla esiqeshini sesithathu seCode for Thought, i-podcast 'kusoftware, ubunjiniyela, ucwaningo nanoma yini ephakathi' eyenziwe nguPeter Schmidt weSociety of Research Software Engineering.